ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ပါတီကို စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးတွေ လာရောက်တွေ့
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP က ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ စစ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ကနေ ကမကထ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အတွက် စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်း အပါအဝင် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တို့ဟာ စစ်တွေမြို့မှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီက ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ အဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်က အာအက်ဖ်အေကို ပြောပြပါတယ်။
"ဒါကတော့ အလုပ်သဘောပါ။ ကျနော်တို့ကလဲ CEC နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်ရမဲ့သဘောပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတီဦးတည်ချက်ကို မေးတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုတက်ရေးနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြစ်ကြောင်း ကျနော်တို့ကလည်း ရှင်းပြပါတယ်။ နောက် ပြည်ထောင်စု တနံတလျား နိုင်ငံရေး စီးပွါးရေး လူမှုရေး တန်းတူရှိမှု ဒါတွေကို ကျနော်တို့ရှင်းပြပါတယ်။ "
အဲဒီလို နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP အနေနဲ့ ဒေသတွင်း နဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘယ်ပါတီနဲ့မဆို ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထိခိုက်မဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင် ပြန်လည် သုံးသပ် ဆွေးနွေး တင်ပြ၊ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ကန့်ကွက်သွားရန်မှာ ပါတီ၏မူ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါက်တာအေးမောင် ပြောပြချက်အရ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လျှပ်စစ်မီး တရက်ကို ၄ နာရီ လောက်သာ ရရှိတာကနေ ၂၄ နာရီလုံး ရဖို့ကနေ စပြီး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာလည်း ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း စစ်တွေ-မင်းဘူး မီးရထား လမ်းဖေါက်လုပ်ရာမှာ မြောက်ဦး အပိုင်း ဖေါက်တဲ့လမ်းမှာ ရခိုင် လူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ ပျက်စီးတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေက မကျေမနပ် ဖြစ်နေတာတွေလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စအပေါ် လာရောက် ဆွေးနွေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
What is the RNDP policy about illegal migrants? I am not Rakhine, but I am feeling very sad that Rakhine is occupied by other people who are not original. Because of corruption of Burmese immigration officers.
Most of Rakhine people are living under poverty even they have plenty of natural resources.
Nov 25, 2010 11:00 PM